Lee Daniels’ The Butler – Myanmar Subtitles
Genre: Biography, Drama Director: Lee Daniels Actors: David Banner, Forest Whitaker, LaJessie Smith, Michael Rainey Jr. Country: USA Released: 16 Aug 2013 Score: 7.2 Duration: 132 min Quality: Bluray 720p Years: 2013 View: 2,455
ဒီဇာတ်ကားက ၂၀၁၃ ခုနှစ်က ထွက်ရှိထားပြီး IMDb Rating 7.2 ရရှိထားတဲ့ အပြင် Oscar ဆုတွေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် Drama ဇာတ်ကားတစ်ကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
ဒီဇာတ်ကားကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ လူမျိုးရေးခွဲခြားတတ်သူမဟုတ်ဖို့ လိုပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတေ့ာ ဒီဇာတ်ကားက ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်တေတုန်းက ပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်လောင်နေတဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထော င်စုက သမ္မတကြီးအနား စောင့်ရှောက်ပေးရတဲ့ Cecil Gaines ဆိုတဲ့ လူမဲ အမျိုးသားတစ်ယောက်အကြောင်းရိုက်ကူး ထားတာကြောင့်ပါပဲ…
ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ ဒီဇာတ်ကားမှာ ဒီမိုကရေစီ ရဲ့ ဖခင်ကြီးလို့တောင်ပြောရမယ့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုရဲ့ နိုင်ငံရေး အရှုပ်တော်ပုံတွေအကြောင်း ကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရှိရမှာတေ့ာသေချာတယ်ဗျ…
ဘာကြောင့်လဲဆိုတေ့ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး၊ အသားအရောင်ခွဲခြားမှုတွေဖြစ်နေတဲ့ နှစ်တွေကနေ စလိုက်တဲ့ အစ
ပထမ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကြီးကနေ လူမဲ အမျိုးသားတစ်ယောက် အမေရိကန် သမ္မတ ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအထိ အကြောင်းအရာတွေကို ဒီဇာတ်ကားကိုကြည့်ရုံနဲ့ သိရှိရမှာဖြစ်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်….
ခေတ်တွေ အရှည်ကြီး ဆွဲပြထားလို့ ပျင်းစရာကောင်းလိမ့်မယ်လို့ ပရိသတ်ကြီး ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်…
မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ…ခပ်သွက်သွက်ရိုက်ချက်တွေ၊ ဒါရိုက်တာရဲ့ တင်ဆက်ပုံချိတ်ဆက်ပုံကောင်းမှုတွေကြောင့်
လူမျိုးဘာသာရေးအသားအရောင်ခွဲခြားမှုတွေဟာ ဘယ်လောက်ထိ လူ့ဘဝကို ပြောင်းလဲစေလဲ…
စိတ်ဓာတ်တွေ၊ အတွေးတွေကို ဘယ်လောက်ထိ ကြမ်းတမ်းစေနိုင်တယ် ဆိုတာတွေသိလာရမယ့် ဒီဇာတ်ကားကို ကြည့်ကိုကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်…
ဒီဇာတျကားက ၂၀၁၃ ခုနှဈက ထှကျရှိထားပွီး IMDb Rating 7.2 ရရှိထားတဲ့ အပွငျ Oscar ဆုတှသေိမျးပိုကျထားတဲ့ ရုပျရှငျသရုပျဆောငျတှနေဲ့ ရိုကျကူးထားတဲ့ ဖွဈရပျမှနျ Drama ဇာတျကားတဈကားပဲ ဖွဈပါတယျ…
ဒီဇာတျကားကို ကွညျ့မယျဆိုရငျ ပရိသတျကွီးအနနေဲ့ လူမြိုးရေးခှဲခွားတတျသူမဟုတျဖို့ လိုပါတယျ၊ ဘာကွောငျ့လဲ ဆိုတေ့ာ ဒီဇာတျကားက ၁၉၆၀ ပွညျ့နှဈတတေုနျးက ပွညျတှငျးစဈမီးတောကျလောငျနတေဲ့ အမရေိကနျပွညျထော ငျစုက သမ်မတကွီးအနား စောငျ့ရှောကျပေးရတဲ့ Cecil Gaines ဆိုတဲ့ လူမဲ အမြိုးသားတဈယောကျအကွောငျးရိုကျကူး ထားတာကွောငျ့ပါပဲ…
ပရိသတျတှအေနနေဲ့ ဒီဇာတျကားမှာ ဒီမိုကရစေီ ရဲ့ ဖခငျကွီးလို့တောငျပွောရမယျ့ အမရေိကနျ ပွညျထောငျစုရဲ့ နိုငျငံရေး အရှုပျတျောပုံတှအေကွောငျး ကို ပွညျ့ပွညျ့စုံစုံသိရှိရမှာတေ့ာသခြောတယျဗြ…
ဘာကွောငျ့လဲဆိုတေ့ လူမြိုးရေး ဘာသာရေး၊ အသားအရောငျခှဲခွားမှုတှဖွေဈနတေဲ့ နှဈတှကေနေ စလိုကျတဲ့ အစ
ပထမ အမရေိကနျပွညျထောငျစုကွီးကနေ လူမဲ အမြိုးသားတဈယောကျ အမရေိကနျ သမ်မတ ဖွဈလာခဲ့တဲ့ အမရေိကနျပွညျထောငျစုအထိ အကွောငျးအရာတှကေို ဒီဇာတျကားကိုကွညျ့ရုံနဲ့ သိရှိရမှာဖွဈလို့ပဲ ဖွဈပါတယျ….
ခတျေတှေ အရှညျကွီး ဆှဲပွထားလို့ ပငျြးစရာကောငျးလိမျ့မယျလို့ ပရိသတျကွီး ထငျကောငျးထငျပါလိမျ့မယျ…
မဟုတျဘူးခငျဗြာ…ခပျသှကျသှကျရိုကျခကျြတှေ၊ ဒါရိုကျတာရဲ့ တငျဆကျပုံခြိတျဆကျပုံကောငျးမှုတှကွေောငျ့
လူမြိုးဘာသာရေးအသားအရောငျခှဲခွားမှုတှဟော ဘယျလောကျထိ လူ့ဘဝကို ပွောငျးလဲစလေဲ…
စိတျဓာတျတှေ၊ အတှေးတှကေို ဘယျလောကျထိ ကွမျးတမျးစနေိုငျတယျ ဆိုတာတှသေိလာရမယျ့ ဒီဇာတျကားကို ကွညျ့ကိုကွညျ့ဖို့တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ…
Mega Myanmar BluRay 720P
#Lee Daniels’ The Butler #Download Lee Daniels’ The Butler Full Movie #Free Lee Daniels’ The Butler Download